Ny fitadiavana ny zanatany tsirairay dia tokony atao imasom-bahoaka manerana ny fanatsarana ny mponina, hatramin'ny fanangonana sombin-tsakafo, amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fampielezana ny haran-koditra ao an-tsekoly, ary aorian'izay dia nipoitra ny haran-dranomasina. Ny fametavetana am-pahamendrehana ireo vatohara ao anatin'ireto fe-potoana ireto dia ahafahan'ny mpitsabo manara-maso ny karazana génotypes ary manombana ny fahombiazan'izy ireo eo amin'ny akanin-jaza sy ny vatohara mandritra ny toe-draharaha samihafa iainana, ary miantoka fa samy hafa be ny karazana génotypes.
Ny fitadiavana ireo zanatany mpanolotra rehefa vita ny sombin-tsakafo dia manome fampahalalana raha toa ka nahatonga ireo fiantraikany ratsy teo amin'ny mponina an-tsokosoko ny fampiasana teknika mikorontana, toy ny fihenan'ny vatana, ny aretina na ny fiainana an-tany. Famafana hatramin'ny 10% ny Acropora cervicornis Ny zanatany mpamatsy vola dia voaporofo fa vola mahomby izay tsy miteraka fahavoazana maharitra amin'ny mpamatsy vola (<1 taona). Raha miteraka fitomboan'ny isan'ny maty na aretina any amin'ireo zanatany mpamatsy vola ny fanangonana akaninjaza dia tokony hanombatombana ny antony mety hitarika azy ireo ny mpitantana ary hanandrana fomba vaovao.
Ny mpanolotra tsirairay dia tokony homena mari-pamantarana miavaka izay navotsotra tamin'ny sombintsombiny izay miditra ao an-tsekoly sy ny sombin-tanim-pokontany rehetra ary ny famolavolana kolonely izay manaparitaka azy. Izany dia ahafahana manara-maso ny karazana génotypes kokoa avy amin'ireo zanatany mpanolotra ho an'ireo zanatany voafidy. Ny fahamarinan'izany dia hanampy amin'ny famolavolana ny fanitarana sy ny fitrandrahana amam-borona. Ny fampahalalana manaraka dia tokony hangonina avy amin'ny mpanjanaka mpanolotra amin'ny fotoana fanangonana:
Ny halavan'ny kolony (diamondra sy haavony lehibe indrindra)
Ny teboka velona mivantana (ho an'ny 10 akaiky indrindra dia marina kokoa ho an'ny tombana amin'ny maso)
Sarin'ny kolony raha azo atao
Corals amin'ny saha
Ny fanaraha-maso ny vatohara dia hitranga tsy ho ela aorian'ny fametrahana azy ao amin'ny faritry ny farihy, indrindra raha nalain'ny vatohara lava lavitra ny garderie ary niaina tsindrona nandritra io fotoana io. Raha kely indrindra, dia tokony hotsaboina ao anatin'ny iray volana monja aorian'ny fandefasana azy any amin'ny trano famakiam-boky iray ny valan-javaboary, manombana ny fahombiazan'ny angovo, ny fiverenan'ny kolonely, ny fanesorana ary ny fiarovana ny rafitra. Ny fanaraha-maso manaraka dia tokony hitranga mandritra ny semi-taona isan-taona (farafaharatsiny) hanombanana ny fahasalamana ho an'ny fahasalamana sy ny ho avy. Ny fanangonana data dia miova arakaraka ny tanjona amin'ny programa, saingy mety ahitana ireto manaraka ireto:
Tafavoaka velona (maty, velona, ​​na tsy hita)
Fanatrehana ireo mpihaza
Ny fisian'ny toe-piainana toy ny ampahafolony, ny fihenan-tsofina, ny aretina ary ny fanavakavahana
Ny fanaraha-maso dia azo atao amin'ny ambaratonga isan-karazany, manomboka amin'ny angon-drakitra ambaratonga zanatany amin'ny antsipiriany, toy ny fitomboan'ny zanatany, ka hatramin'ny topy maso haingana hanombanana ny fitoniana eo amin'ny sehatry ny akanin-jaza sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny toetoetran'ny zanatanin-jaza. Ireo karazany roa amin'ny fanangonana angon-drakitra dia manan-danja ary ho faritan'ny tanjon'ny programao. Ny angon-drakitra ambaratonga zanatany amin'ny antsipirihany dia zava-dehibe mba hamenoana matetika kokoa mandritra ireo taona voalohany taorian'ny fananganana zazakely mba hanombanana ny fahombiazan'ny akanin-jaza sy hamaritana ny toerana azo hatsaraina. Schopmeyer et al. (2017) dia nanolotra mari-pahaizana> 80% tafavoaka velona amin'ny haran-dranomasina ao anaty akanin-jaza. Raha vantany vao tafapetraka tsara ny akanin-jaza, ny fanangonana tahirin-kevitra dia mety hafindra amin'ny fanangonana tahiry fandinihana bebe kokoa toy ny haavon'ny predation na aretina, ary ny haben'ny zanatany mba hamaritana ny fotoana tokony hitrandrahana sy ny habaka ilaina amin'ny zanatany vaovao. .
Ny fanaraha-maso ny vatohara amin'ny hazo vatosokay misoratsoritra. Sary © John Melendez
Ao anatin'ny kolontsain'ny vatohara dia zava-dehibe ny handinihana ny fisian'ny karazana génotype izay maneho ny fanoherana ny fitaintainana, toy ny fipoahan'ny hafanana na ny aretina. Mety ho kandidà tsara amin'ny famolavolana ny toe-piainana manokana izy ireo ary mety hanana ny fototarazo izay hanampy ny vahoaka hetsi-panoherana mifanaraka amin'ny tsindry manerantany. Na dia izany aza, zava-dehibe ny tsy hambolena karazana génotypes mihamitombo, satria zava-dehibe kokoa ny fampivoarana ny fahasamihafana ara-pinoana ao anatin'ny mponina ao an-toerana.
Mety ilaina ny hetsika fanaraha-maso fanampiny izay manodidina ny fisakanana ny fitrandrahana sy fanitarana. Mandritra ny hetsika fisakafoana tsirairay, dia zava-dehibe ny manara-maso ny karazan-karazan-java-boahary izay zaraina ankehitriny. Ireo angon-drakitra ireo dia tsy maintsy atao amin'ny fitantanana ny orinasam-pikarakarana zaza tsy ampy taona mba hijerena ny habetsaky ny vatohara sy ny karazana génotype amin'izao fotoana izao ao amin'ny tahirin-tsakafo. Ny fanangonana izany tahirin-kevitra izany dia matetika manampy amin'ny fahatakarana ny fahasamihafana eo amin'ny famokarana genotype, fahasalamana ao an-trano, ary famolavolana drafitra.
Mandritra ny hetsika fanaraha-maso tsirairay, ny fotoana dia tokony hatokana amin'ny fanombanana sy fikojakojana ny firafitry ny akanin-jaza. Ireo adidy ireo dia misy ny fanamarinana ny tsipika misy ny fanendahana na ny faritra misy fahalemena, ny hazo haran-dranomasina dia mitsingevana amin'ny fihenjanana mety, mampihena ny firoboroboana (ny ahidrano, haran-afo, tonicates, barnacles, sns.), Mampiorina ireo sombin-javatra malalaka, manala ireo mpiremby vatohara, ary manala ny taolana haran-dranomasina maty raha azo atao.
Fanaraha-maso ara-toekarena: Raha avela ny fotoana, dia tokony hojerena ny fitaovam-pitaovana alohan'ny hitrangan'ny oram-baratra lehibe na fanelingelenana mba hahazoana antoka fa ny rafitra rehetra dia azo antoka, ary ny sombi-pamokarana dia mifatotra na miovaova. Rehefa mamela ny fepetra dia tokony hitranga ihany koa ireo fihetsiketsehana manaraka ny oram-baratra na ny hetsika.
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fanaraha-maso ny vato harana dia ny manara-maso ny fahombiazan'ireo zanatany tsirairay izay azo antoka amin'ny fantsom-bary. Na inona na inona ny drafitry ny fanaraha-maso, dia tokony hanara-maso ny fambolena mandritra ny iray volana amin'ny volana manaraka mba hananganana ireo vatohara izay nesorina rehefa avy nanamboatra na nanamboatra vatohara sasantsasany raha misy ny fiainana an-tany. Aorian'izany, ny fanaraha-maso ny fahasalamana na ny fahombiazana dia matetika mitranga ao anatin'ny enim-bolana na 12 volana aorian'ny fiterahana. Ny fanaraha-maso fanampiny dia mety hitranga aorian'ny fotoana na mandritra ny fisehoan-javatra sasany, toy ny oram-baratra lehibe, ny hetsika marevaka lehibe, na ny tsy fahampian-tsakafo.
Miorina amin'ny tetikasa famerenana ny famerenana amin'ny laoniny ny harena voajanahary ao Floride, dia misy soso-kevitra momba ny fivelomana ny 77% momba ny fitrandrahana mandritra ny taona voalohany. ref Ny fiheverana avy amin'ny fiatrehana io aretina io dia mety ho vokatry ny tsindrona amin'ny fambolena, ny fihantsiana avo, ny aretina, ny fandroahana, na ny antony hafa. ref Raha miseho ny mety hisian'ny fahafatesana, dia zava-dehibe ny manara-maso sy manoratra ny antony mahatonga ny fiainana an-tany raha azo atao izany ary manova ny fomba fampihenana ity fiainana an-tany ity. Ny rakitra voarakitra ho an'ny karazan-kazo tsirairay dia ahitana ny:
Status: maty, velona, ​​tsy hita, na tapaka
Condition: ny habetsaky ny teboka velona (%), ny habetsahan'ny fatiantoka vao haingana (%), ny ahiahy vokatry ny fatiantoka (toy ny aretina, ny fanavakavahana, ny fiavonavonana), ny fisian'ny rivotra na ny fandrehitra, ny ala na ny mpifaninana hafa,
fiainana an-tany:% of colony with complete loss of tissue
Size (sampan-java-manondro): ny lavaka sy ny haavony lehibe, ny fanamafisam-peo lehibe, na ny totalim-bolana ('TLE', ny famaranana ny sampana rehetra tafaraka)
Size (vatosokay vato): ny diamondra lehibe sy ny haavon'ny kolony
Ny refin'ny habe sy ny totalin'ny tsipika dia refesina indrindra amin'ny alàlan'ny mpanapaka malefaka na kasety fandrefesana. Ho an'ny haran-dranomasina rantsana, manjary sarotra ny fandrefesana TLE raha vantany vao lasa lehibe (> 50cm TLE) ny haran-dranomasina ary manana sampana maro. Amin'ireny tranga ireny, ny fampitoviana tombanana ny habeny dia novolavolaina ho an'ny haran-dranomasina miompana any Karaiba amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny halavan'ny zanatany, ny halavany ary ny sakany. ref Ny fitomboan'ny taom-piofanana dia mety ho voaisa amin'ny fiovaovan'ny TLE mandritra ny fotoana ho an'ny vatohara tsirairay. ref
(Avy amin'i Johnson et al. 2011, Torolàlana momba ny famerenana indray ny Caribbean Acropora, pejy 21)